FAALLO:-Golaha Iskaashiga Dowlad-Gobaleedyadda Awood Ma U Leeyihiin Hawlaha Amisom? | Saadaal Media
FAALLO:-Golaha Iskaashiga Dowlad-Gobaleedyadda Awood Ma U Leeyihiin Hawlaha Amisom?
Madaxda Dowlad-gobaleedyadda Jubbaland, Puntland, Hirshabelle iyo K/Galbeed waxay bishan October 8-dii ilaa 10-dii Shir ku yeesheen magaalladda Kismaayo oo Caasmad KMG u ah Maamulka Jubbaland, kaasi oo u muuqda mid ay kaga soo horjeedaan DFS ee ay Dowladaha Caalamka aqoonsan yihiin.
Shirkaasi waxaa laga soo saaray War-murtiyeed ka kooban 16-qoddob, kuwaasi oo badankooda laga dhadhansanayo Go’aamo aan Qiil Lahayn.
Xeeldheerayaasha ayaa rumeysan inuu Kulankaasi iska ahaa mid Laab-la-kac ah iyo Danno Siyaasadeed lahaa, waxayna Madaxda Maamul-gobaleedyadda isku muujiyeen Hoggaamiye-kooxeedyadda cusub ee Somalia
Waxay si il-duufsi leh ugu tunteen Qaddiyadda Ummadda Soomaaliyeed, waxayna si cad u xaqireen Kaalinta DFS ee Talada Qaranka.
Kulanka Kismaayo ayaa u muuqda mid ay muhiimadiisu ahayd in Indhaha Bulshadda laga weeciyo Hadal-haynta Siyaasadda Hoggaamiyayaasha Goballadda ee sheegtay inay taageersan yihiin Isbahaysiga Imaaraadka iyo Sacuudiga.
Sama-jeclayaasha Bulshadda ayaa rumeysan inay Madaxda Jubbaland, Puntland, Hirshabeelle iyo K/galbeed ku turunturoodeen Masraxa Siyaasadda iyo inay iska lumiyeen Fursad ay DFS ugala doodi kari lahaayeen Mowqifka ay labada dhinac iska taageen Khilaafka Khaliijka.
War-murtiyeedka Madaxdaasi waxaa laga dareemi karaa inay socod-barad ku yihiin Qeexitaanka Axdi-qarameedka ee Awoodaha Hay’addaha Qaranka iyo kuwa Goballadda, waana ayaan-xumo inay Madaxdaasi s qaldan ku fasirteen Qoddobadda ay u cuskadeen War-murtiyeedka ay ka soo saareen Kismaayo.
Khubarada Sharciga iyo Milliteriga waxay amakaag ka muujiyeen Awoodaha Golaha Iskaashiga Maamul-gobaleedyadda ee ay ku gaari karaan Go’aano DFS oo keliya loo idmaday.
Sharci Caalami ahaan, DFS ayaa iska leh Awoodaha ay kaga hadli karto Hawlgalka AMISOM, balse aysan Madaxweyne- Gobaleedyadda lahayn awood ay ku laaci Karaan Figta Sare ee Awoodaha DFS loo idmaday.